Inona no fahasamihafana eo amin'i WordPress.com sy WordPress.org? & Ndash; Ny Semalt no manome ny valiny
Inona no fahasamihafana eo amin'i WordPress.com sy WordPress.org? - Ny Semalt no manome ny valiny
Raha mikasa ny hampivoatra tranokala iray ianao, dia tsy maintsy misafidy ny sehatra WordPress mba hananganana azy. Araka ny tombantombana, ny Power Wordpress dia mihoatra ny telopolo isan-jaton'ny aterineto ary iray amin'ireo sehatra malaza indrindra. Manolotra karazana lohahevitra, endri-javatra, safidy, ary zavatra hisafidianana izany. Fa alohan'ny handoavanao WordPress, tokony ho fantatrao ny fahasamihafana amin'ny wordpress.com sy Wordpress.org. Julia Vashneva, mpitarika ny fahombiazan'ny mpanjifa Semalt dia nanamarika fa na dia tsy dia lehibe loatra aza ny fahasamihafana dia tokony ho fantatrao ny tokony hofidiana sy ny fomba hananganana tranonkala amin'ny fomba tsara kokoa.
WordPress no anarana tsy mila fampidirana. Ity fitaovana ity dia mampiasa ireo tranonkala maro amin'ny serivisy marobe amin'ny aterineto. Raha tokony alefa mivantana ny rakitra amin'ny servers amin'ny famoronana vohikala, afaka mampiasa WordPress ianao mba hamoronana rakitra backend sy hamoaka azy ireo amin'ny fomba tsara kokoa. Noho izany dia tsy maintsy mamorona, mitantana ary manitsy ny pejy rehetra amin'ny tranonkala ianao ary mamorona votoaty tsara, lahatsoratra bilaogy, ary maka sary maro. Wordpress dia karazana rafitra fitantanana ny tranonkala fampivoarana ny tranonkala. Ity rafi-piaviana misokatra ity dia nanome ny mpampiasa azy amin'ny safidy maro sy safidy maro hifidianana. Ny fitaovana, fantatra amin'ny anarana hoe WordPress.org dia toerana ahafahanao haingana ireo kopian'ny rindrambaiko sy ny asa efa nataonao. Izany dia programa ho an'ny tenany manokana, ary tsy omena anarana nomena anarana ianao. Azonao atao ny mamorona tranonkala maro eto amin'ity sehatra ity araka izay azo atao raha tsy mila manana anarana nomena anarana sy mpizara iray. Wordpress.com, etsy ankilan'izany, dia natsangan'i Matt Mullenweg ary izy no tompon'ny Automattic. Ao no ahafahanao manana anaran-sehatra iray manokana ary afaka manangana ny tranokalanao manokana amin'ny fomba tsara kokoa. WordPress.com dia sampana matihanina, ampiasaina amin'ny karazan-javatra maro..Azonao atao ny mamoaka ny votoatiny sy mampiroborobo ny tranokalanao rehefa nandoa ny saran'ny tranonkala iray sy ny orinasa mpampiantrano.
Samy manao fikarohana WordPress ny olona samihafa ary mitady ny fomba famoronana tranokala maimaim-poana, ary izany dia azo atao raha manana WordPress.org ianao. Fa raha mampiasa WordPress.com ianao, dia tsy maintsy mandoa vola avy amin'ny anarana sy ny fampiantranoana. Na izany aza, ny orinasa sasany dia manome ny mpampiasa azy ireo ny tranokalan'ny faritra maimaim-poana na dia mampiasa wordpress.com aza izy ireo
WordPress.com dia afaka miasa amin'ny rafitra fandoaviana karama ary manana karazan-javatra maro. Raha mikasa hanangana tranonkala matihanina ianao, ny vidin'ny isan-taona dia zavatra avy amin'ny $ 19 ka hatramin'ny $ 25. Azonao atao ny manavao ny tranokalananao wordpress.org ary manamboatra fomba amam-panao manokana. Misy karazana fonosana maromaro azo isafidianana, ary ny vidiny dia tsy mitovy amin'ny orinasam-pambolena iray.
Ny endrika sy ny lohahevitra
Raha nampiasa tranonkala maimaim-poana tao amin'ny Wordpress.org ianao, dia misy ny fahafaha-miditra amin'ny tetikasa sy ny lohahevitra. Fa raha mampiasa ny tranokalan'ny Wordpress.com ianao, dia afaka mahazo karazana sy loha-hevitra maro azo isafidianana. Ny tranokalanao dia azo hatsangana bebe kokoa sy mahatalanjona amin'ny wordpress.com, ary omena karazana endritsoratra maro be ianao ary koa fonosana amin'ny tranokala.
Toy ny design sy ny lohahevitra, dia afaka manatontosa asa maro sy plugins ao amin'ny Wordpress.org ianao, fa ny Wordpress.com kosa dia manolotra asa faran'izay lavitra ary ny plugins dia mihoatra noho izay antenainao.
Raha vao nanapa-kevitra ny hampivelatra tranonkala iray ianao, ny dingana farany dia ny mitady orinasa fampiantranoana azo antoka ary mandoa vola amin'ny tranonkala wordpress.com Source .